I-Psychosis | Impilo Yengqondo Texas | Izimo Ezivamile Zempilo Yengqondo
I-Psychosis isho isimo sengqondo esifaka phakathi ukudideka phakathi kwento engokoqobo nengokoqobo. I-Psychosis ingathinta zonke izinzwa zomuntu ezinhlanu, indlela aziphatha ngayo nemizwa yakhe. Ngesikhathi se-psychosis, ingqondo ilahlekelwa ukuxhumana okuthile neqiniso. Umuntu angaba nokuhlangenwe nakho okudidayo nokwesabekayo hhayi yena kuphela, kodwa nalabo abaseduze nabo.
Izimpawu zengqondo ziyehluka, kepha izimpawu ezimbili ezivamile ukusangana nokukhohlisa. Umuntu onokubona izinto ezingezansi uzokuzwa, azwe, abone, anuke, noma anambithe okuthile okungenzeki empeleni. Imibono, yize ingekho ngokoqobo, ingokoqobo kumuntu onayo ngakho-ke ingesabisa kakhulu futhi iphazamise impilo. Ukukhohlisa kulapho umuntu egcina ukukholelwa ngokuqinile kokuthile umphakathi ongakubona njengokungelona iqiniso noma okungasekelwe ngokoqobo. Lezi zinkolelo zingethusa, zidideke futhi ziphazamise impilo yansuku zonke yomuntu nalabo ababazungezile.
I-Psychosis ngokuvamile ivela ngenxa yenhlanganisela yofuzo lomuntu kanye nokuhlangenwe nakho kwempilo. Imicimbi ecindezelayo, ukusetshenziswa kwezinto, noma izimo zempilo ngokomzimba (i-Dementia, i-Parkinson’s, njll.) Kungadala ukucabanga kwengqondo kwabanye abantu. I- Isikhungo Sikazwelonke Sezempilo Yengqondo ibika ukuthi abantu abathathu kwabathathu bazothola isiqephu sokugula kwengqondo ezimpilweni zabo 1. Kwesinye isikhathi okuhlangenwe nakho okwedlulele kungadala isikhathi esifushane sokuphazamiseka kwengqondo komunye umuntu okuhlala izinsuku ezimbalwa kuphela, lapho-ke kungaphinde kwenzeke. Kwabanye, i-psychosis ingaba yinto yesimo sempilo yengqondo efana nokuthi; i-schizophrenia, i-schizoaffective disorder, i-bipolar disorder (ngaphambili eyayibizwa nge-manic depression), kanye ukucindezeleka okukhulu .
ISchizophrenia yisimo esithile sempilo yengqondo lapho kuvela khona izimpawu zengqondo. Lezi zimpawu zingafika zidlule futhi zivame ukusizwa yimithi. Ngokungeziwe ekucingeni nasekukhohlisweni, abantu abaphila ne-schizophrenia nabo bangathola inzalo eyehlisiwe kanye nogqozi lokwenza izinto, ubunzima bokukhombisa noma ukutolika imizwa, noma ukuhoxa emisebenzini yezenhlalo nakubudlelwano. Izimpawu zokuqonda nazo ziyatholwa ngabantu abaphila ne-schizophrenia, njengamakhono amancane okwenza izinqumo, ukugxila emisebenzini, nokusebenzisa imininingwane ngemuva nje kokuthi ifundwe.
Izimpawu ze-schizophrenia ngokuvamile zikhula phakathi kweminyaka eyi-16 nengama-30 2. Akunasizathu esaziwayo se-schizophrenia, kepha abacwaningi bakholelwa ukuthi izakhi zofuzo kanye nokuxhumana kwazo nemvelo yomuntu ngamunye kuyadlala indima ekuthuthukiseni ukugula kanye nasezilinganisweni ezahlukahlukene zamakhemikhali ebuchosheni.
Ukuphazamiseka Kwengqondo Okubangelwa Yizinto
Enye imbangela yokugula kwengqondo kusuka ekusetshenzisweni kwezidakamizwa notshwala, okubizwa ngokuthi ukuphazamiseka kwengqondo okubangelwa yizidakamizwa. Lesi simo sidala izimpawu ezinjengokusangana nokukhohlisa. Ezimweni eziningi isipiliyoni salezi zimpawu sithatha isikhathi esifushane, sithatha amahora noma izinsuku kuphela. Ezimweni ezingavamile, ukusetshenziswa okunzima nesikhathi eside komuthi kungadala ukugula kwengqondo okuhlala izinyanga noma iminyaka, isikhathi eside ngemuva kokuthi umuthi ushiye umzimba. Ukwelashwa kwe-psychosis okubangelwa yimithi kubandakanya kokubili ukwelashwa ngokushesha, kufaka phakathi ukulaliswa esibhedlela, nokunakekelwa kwesikhathi eside, imvamisa endaweni yokuhlala futhi kusetshenziswa imishanguzo kanye nezindlela zokuziphatha.
Izimpawu Nezimpawu Ezijwayelekile Ze-Psychosis
Akuwona wonke umuntu obhekana ne-psychosis ozoba nezimpawu ezifanayo. Abanye abantu bazohlangabezana nokunye, kanti abanye bangathola okwehlukile.
Ukusangana, ukuzwa, ukubona, ukunambitha, ukuhogela, ukuzwa izinto ezingezona ezangempela
Ukukhohliswa – izinkolelo noma imibono engelona iqiniso (okusho ukukholwa ukuthi bangumlando)
Imicabango noma imibono engajwayelekile
Ukunyakaza okungavamile komzimba
Kunzima ukugxila noma ukuqedela imisebenzi
Ukuncipha kwenkulumo yemizwa
Ukuphelelwa yintshisekelo emisebenzini / kwezenhlalo
Inkulumo engahlanganisi noma enamaphikiso
Inhlanzeko yomuntu siqu, isikhathi sokulala, noma imikhuba yokudla
Ukwelashwa kwe-Psychosis neSchizophrenia
Izinketho eziningi zokwelashwa kufaka phakathi imishanguzo, ukuqeqeshwa kwamakhono, ukwelashwa kwengqondo, nezindawo zokuhlala zokwelashwa ziyatholakala kubantu abanesifo sengqondo noma abaphila ne-schizophrenia. Ukululama ngokuphelele kwi-psychosis kungenzeka, kuya ngokuthi kubangelwa yini, futhi ithemba lihlale likhona kungakhathalekile ukuthi unjani umuntu. Ucwaningo lukhombisa ukuthi uma umuntu ethola usizo olufanele kungakapheli unyaka wokuqala kwesiqephu sakhe sokuqala se-psychosis, njengokuqeda ukunakekelwa okukhethekile okuhlanganisiwe , kunethuba elingcono lokuthi bafunde ukuphatha ukugula futhi baphile impilo ephezulu.
Ukuze ufunde kabanzi nge-psychosis ne-schizophrenia nezinhlobo ezahlukahlukene zokwelashwa ezitholakalayo, ungavakashela lezi zingosi:
Ikhasi lokunakekelwa okukhethekile le-Texas Health and Human Services (HHS) le-psychosis yesiqephu sokuqala.
INational Alliance of Mental Illness (NAMI) – Isifo Sengqondo Sasekuqaleni.
Isikhungo Sikazwelonke Sezempilo Yengqondo (NIMH) – iSchizophrenia.
INational Institute of Mental Health (NIMH) – Isiqephu Sokuqala Samaqiniso Esiqephu Sengqondo.
Imodyuli yokuqwashisa ezempilo ekuziphatheni oku-inthanethi kwi-Psychosis neSchizophrenia.
1. Isikhungo Sikazwelonke Sezempilo Yengqondo: Ishidi Leqiniso: Isiqephu Sokuqala Sengqondo.
2. Isisekelo seBongo nokuziphatha: Yini iSchizophrenia?
https://www.bbrfoundation.org/what-is-schizophrenia-signs-symptoms-treatments #: ~: